८ मार्च र महिलाका समस्या – Complete Nepali News Portal
ScotNepal April 26, 2019
– कल्पना पौडेल ‘जिज्ञासु’
दास व्यवस्थामा मान्छेको पनि व्यापार गरिन्थ्यो । त्यतिखेर मान्छेलाई बेच्ने, कुटने, र मार्ने पनि गरिन्थ्यो । त्यति बेला यी घटनामा परेर कति जना गहभरि आँशु झार्दथे भने कतिपय रिसले चुर हुन्थे । कतिपय दारा किट्थे । कतिपय मुठ्ठी कसेर त्यो अन्यायपूर्ण व्यवस्थाको विरोध गर्दथे । आज त्यो क्रुर र निच प्रकारको मानिने दास व्यवस्था अतितको विषयवस्तु बनिसकेको छ ।
सामान्य रूपमा हेर्दा हिंसा शब्द शाररिक यातना बा कुटपिटसँग सम्बन्धित देखिन्छ तर यसले व्यापक अर्थ ओगट्छ । आज पनि महिलाहरू ठूलो सङ्ख्यामा घरेलु हिंसाबाट आतङ्कित छन् ।सासूले बुहारीमाथि गर्ने र पतिले पत्नीमाथि कुटपिट गर्ने, महिलाको इच्छा विपरीत यौन दुराचार गर्ने, पुत्र लाभ नभएकोमा महिलामाथि हुने मानसिक यातना आदि घरेलु हिंसाका केही उदाहरण हुन् । धेरै महिलाहरू पतिको जबरजस्ती करणीबाट पीडित छन्† तर उनीहरू यसलाई उजुरीको बिषय बनाउने साहस गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि घरेलु हिंसासम्बन्धी अपराध, अनुसन्धान तथा सजायको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भैसकेको छ† तर अझै पनि घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरूले उजुरी दिने साहस धेरै कमले मात्र गर्दछन् । आजको समाज, संस्कृति, धर्म आदिले पुरुषले महिलामाथि गर्ने हिंसालाई वैधानिकता दिने काम गरेको छ । त्यसकारण पुरुषको ज्यादतीविरुद्घ उजुरी दिँदा महिलाहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको स्थिति छ ।
बहुबिवाह पनि महिलाहरूका लागि एक प्रकारको उत्पीडन नै हो । “मर्दकी दश वटी” भन्ने उखानै छ । पुरुषले अर्को बिवाह गर्छ । त्यसलाई समाजले सामान्य रूपमा लिन्छ । त्यही काम एउटी महिलाले गर्छे भने त्यो अपराधजन्य हुन्छ । विषय एउटै हुन्छ तर मापदण्ड बेग्लै हुन्छ । यसरी एउटै विषयमा समाजको मापदण्ड भने दुई प्रकारकोहुने गरेको छ ।
महिलाहरू अहिले पनि बहुबिवाहबाट पीडित रहेको देखिन्छ । दुर्गम गाउँमा गएर हेर्ने हो भने अवस्था अझै दर्दनाक भेटिन्छ । “मर्दका दश वटी” भन्ने उखानले समाजमा महिलामाथि सौता हाल्नको लागि खुल्ला छुट दिन्छ वा प्रोत्साहन दिन्छ ? यसरी बहुबिवाहले पुरुषलाई एकै पटक एकभन्दा बढी महिलासँग व्यभिचार गर्ने छुट दिन्छ भने महिलाहरू सम्पत्तिमा समान अधिकारको अभावमा अनेक यातना सहेर पनि सौता र लोग्नेसँगै कष्टप्रदः जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
दाइजो प्रथा पनि महिला हिंसाको एउटा रूप हो । खासगरी तराईलाई यस समस्याले निकै गाजेको छ । दाइजोे मागेबमोजिम दिन नसकेका कारण लोग्ने र सासु मिलेर बुहारीको हत्यासम्म गरिएका थुप्रै घटना छन् । यसरी श्रीमतीलाई जीवनसाथीको रूपमा हैन, वस्तुको रूपमा हेर्ने व्यापारिक र समान्तवादी चिन्तनबाट ग्रसित हँुदा यस प्रकारका घटनाले ठाउँ पाइरहेको देखिन्छ । दाइजोलाई नेपालीमा कानुनी मान्यता प्राप्त नभए पनि कानुनका रखवाला वर्तमान राज्यव्यवस्थाका नाइकेहरूले बिवाहलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने र करोडौँ खर्च गर्ने परिपाटीले दाइजो प्रथा निरुत्साहित गर्नुकोे साटो बढावा दिने काम भएको छ ।
मानव समाजले २१ औँ शताब्दीमा पाइला टेक्दासम्म पनि नेपाली समाजमा बोक्सीको नाममा महिलाहरूलाई मलमूत्र खुवाउने जस्ता अपराधजन्य काम हुनु ज्यादै लज्जाजनक कुरा हो । समाजमा बोक्सी त्यही हुन्छ, जो असहाय, कमजोर, अशिक्षित र गरिब छन । आजसम्म धनी, बलियो मान्छे बोक्सी बनेको छैन । के बोक्सी विधा कमजोर, असहाय, अशिक्षितले मात्र सिक्ने विधा हो र ? यसबाट यो प्रस्ट हुन्छ कि बोक्सी हेला गरेर प्रयोग गरिने शब्द हो । बोक्सी यदि विद्या हो भने त्यसको गुरु को ? त्यो कुन विश्वविद्यालयमा पढाइन्छ ? त्यो विद्या पुरुषले किन पढ्दैनन् ? यसको जबाफ बोक्सी भनी आरोप लगाउनेहरूले दिनु पर्छ । वर्तमान विश्व विज्ञान र प्रविधिले यति शक्तिशाली बनिसक्दा पनि नेपाली मानसपटलमा बोक्सीको भुत हट्न सकेको छैन । नेपाली मानसिकता अझ पनि सामन्ती, रुढिवादी र अन्धविश्वाशको घेराबाटमाथि उठ्न सकेको छैन । बोक्सी जस्तो अलौकिक शक्तिको कुरा गरेर महिलालाई यातना दिने र मलमूत्र खुवाउने कार्य हुनु विडम्वनाको विषय हो । समाजमा आज पनि सयौँ महिलाहरू बोक्सीको आरोपमा प्रताडित बनिरहेका छन् ।
चेलीबेटी बेचबिखन नेपालको सन्दर्भमा एउटा प्रमुख समस्याको बनेको छ । नेपालमा वर्षेनी ५देखि ७ हजारसम्मको सङ्ख्यामा नेपाली चेलीहरू भारतको बेश्यालयमा बेचिने गरेको तथ्याङ्क केही वर्ष अगाडि नै सार्वजनिक भएको थियो । डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली महिलाहरू भारतका विभिन्न शहरमा शरिर बेचिएको बताइन्छ । अझ भारतको बाटो हुँदै संसारका अन्य मुलुकमा पुर्‍याइएका नेपाली चेलीहरूको अवस्था ज्यादै डरलाग्दो छ । यसरी भारतको खुल्ला सीमानाका कारण मानव तष्करीलाई सहजता पैदा भएको छ । विशेष गरी दुर्गम बस्तीका सिधा, अशिक्षित गरिब महिलाहरूलाई नोकरी दिने बहानामा वा बिवाह गरेर घुम्न लैजाने बहानामा चेलीबेटीहरूको बेचबिखन हुने गरेको छ । आफन्तजनबाट पनि यस्ता क्रियाकलाप प्रशस्तै हुने गरेको पाइन्छ । मान्छेले मान्छेलाई बिक्री गर्ने जस्तो जघन्य अपराध हँुदा समेत राज्य मुकदर्शक बनेर बसेको देखिन्छ । चेलीबेटी बेचबिखन मानव तष्करहरूको नाफा कमाउने ठूलै धन्दा बनिरहेको छ । यौन व्यापारको राजधानी मानिने भारतको शहर मुम्बईमा वेश्याबृत्ति गर्ने कुल महिलाहरूको आधा सङ्ख्या नेपालीहरू रहेको अनुमान छ । तर यसरी लाखौँ महिलाहरू भारतको वेश्यालयमा नारकीय जीवन ब्यतित गर्न बाध्य बनाउने मानव तष्करहरू समाजमा खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।
बलात्कार अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । बलात्कारले महिलालाई शारिरीक मात्र होइन, मानसिक रूपमा समेत गम्भीर आघात पुर्‍याउँदछ । तर नेपालको सन्दर्भमा बलत्कारका कैैयौँ घटना बाहिर आउन सक्दैनन्† किनभने समाजले महिलाको अस्मितालाई यौन शुद्धतासँग जोडेर हेर्ने गर्दछ । देशमा बलात्कारका घटना दिनहुजसो घटिरहेका छन् । ७ वर्षको बालिकादेखि ७० वर्षको बृद्धा महिलाहरू बलत्कारका शिकार भइरहेका छन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा समेत कठोर कानुन बन्न नसक्दा बलात्कारीहरू खुला रूपमा हिँडिरहेका छन् । कानुनमा बलात्कार सिद्ध गर्ने पर्याप्त आधार नहँुदा मुद्दा हारिने स्थिति पनि छ ।
मातृत्व क्षमता बोकेका महिलाहरूको रजस्वलालाई छाउपडी प्रथाले अत्यन्तै घृणित र अपमानित तुल्याएको छ । रजस्वलाको समस्यामा महिलालाई पर्याप्त आराम र पौष्टिक खानाको आवश्यकता हुन्छ† तर सुदूर पश्चिमका केही जिल्लाहरूमा रजस्वला भएका महिलालाई गोठमा राख्ने र दुध, दही जस्ता पौष्टिक खानाबाट बञ्चित गर्ने छाउपडी प्रथा अहिले पनि विद्यमान रहेको छ । विज्ञानले यतिका प्रगति गरिसक्दा पनि नेपाली समाजको मानसिकता अझै पनि उठन सकेको छैन ।
धर्मको नामबाट पनि महिलाहरू उत्तिकै ठगिएका छन् । संसारका सबै धर्म पितृसत्तात्मक छन् । संसारका सबै धार्मिक ग्रन्थहरू पुरुषले नै बनाएका हुन् । धार्मक व्याख्या, विश्लेषण र प्रवचन गर्ने कार्य पनि पुरुषले नै गरेका छन् । ठूल्ठूला दर्शन, सिद्धान्तका ब्याख्याकार पनि पुरुष नै छन् । यसरी सबै क्षेत्रमा पुरुषले विजय कायम गरिसकेपछि उनीहरूले आफनो लिङ्ग अनुकुलतामा नियम बनाए र लागु गरे ।
यसरी हिंसाका विभिन्न रूपहरूमध्ये देउकी प्रथा, छुवाछुत आदि पनि हिंसाका रूपहरू हुन् । बाटोमा हिडिरहेको बेला महिलालाई पुरुषले जिस्काउँछ भने त्यो पनि हिंसाको रूप हो । कसैलाई मानसिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पुर्‍याइन्छ भने त्यो पनि हिंसा हो । यसरी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूपबाट पछाडि पारिएका र ठगिएका महिलाहरू मानब अधिकारको मामिलामा सबैभन्दा ठगिएका छन्† किनभने समान रूपमा जिउन पाउनु तथा समान अवसर पाउनु मान्छेले मान्छे भई बाच्न पाउनु मानव अधिकारको मान्य सिद्धान्त हो । यस अवस्थामा सवल र समुन्नत समाज निमाणका लागि आधाभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका महिलाहरूको समग्र पक्षमा सुधार गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।
घरेलु हिंसा र गरिबीले पीडित धेरै नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीमा लाग्न बाध्य छन् । परिवार र आफ्नो भविष्यलाई आर्थिक टेवा पुर्‍याउन मात्र होइन, घरेलु हिंसाबाट मुक्त हुन, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, सामाजिक शोषण र पुरातनवादी मूल्य, मान्यताबाट छुटकारा पाउनका लागि पनि नेपाली महिलाहरू अस्थायी कामदारको रूपमा बिदेशिने क्रम बढ्दो छ । यसरी विदेशिने महिलाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्मै हिंसामा पर्ने गरेका छन । स्वदेशमै दलालले अनावश्यक कमिसन खोज्छन् । कतिपय अवस्थामा आफ्नै परिवारका मान्यजनले विदेश पठाउन दबाव सिर्जना गर्छन् । हिंसा विमानस्थलमै हुन्छ । सेल्टर होममा भेडा–बाख्रा जस्तो गरी घरमालिकको पखाइमा धेरै सङ्ख्यामा लामो समय कुराउँछन । तोके जति तलब नदिएर ज्यालाको शोषण हुन्छ । बिमारी पर्दा राम्रो उपचार हुन्न । यौनजन्य हिंसाको सिकार भएका समेत प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् ।
महिलाहरूलाई कानुनी उल्झनबाट मुक्त गरी आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमद्वारा आत्मनिर्भर बनाउन विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु पर्दछ । विदेशमा कामको प्रकृति र बसाइँका हिसाबले विशेषतः खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाहरू बढी शोषण र हिंसामा पर्ने गरेका छन् । त्यति मात्र नभई स्वदेशमा फर्किएपछि पनि सामाजिक लाञ्छना, श्रीमान–श्रीमतीबीच वैमनस्यता जस्ता समस्याले थप हिंसा भित्रिएको छ† जसको परिणामस्वरू एक पटक बैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये धेरै महिलाहरू पुनः विदेश फर्कने गरेको तितो यर्थाथता हाम्रा सामु छ । छोरा, बुहारी, छोरीहरू बिदेशिँदा केटाकेटीको हेरचाहमा बृद्घ माता, पिता, सासु–ससुरालाई थप बोझ भइरहेको छ । यसले गर्दा पारिवारिक बिखण्डन, चर्को ब्याज दरको ऋणभार, आश्रित परिवारजन कुलतमा फस्ने जस्ता सामाजिक समस्या पनि देखिने गरेका छन् । अतः बैदेशिक रोजगारीका कारण कमजोर हँुदै गएको मूल्य–मान्यतालाई बेलैमा पहिचान गरी सुधार्नु र महिलामाथि हुने गरेका हिंसा रोक्नका लागि सरकारी र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनु जरुरी भएको छ । १०९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा हरेक महिला सङ्गठन र राजनैतिक दलहरूको ध्यान तिनै विषयहरूमा केन्द्रित होस् ¤ अन्त्यमा आठमार्चको सबै महिला आमा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना